सञ्चारमन्त्री बनेकी नैनकलाकाे राजनीतिक याेगदान के हाे ? बादलकी श्रीमती मात्रै हुन त ? पूरा पढ्नुस् - News 88 Post
June 10, 2021 N88LeaveaComment on सञ्चारमन्त्री बनेकी नैनकलाकाे राजनीतिक याेगदान के हाे ? बादलकी श्रीमती मात्रै हुन त ? पूरा पढ्नुस्
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म १८ पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्। स्थिरताको नारा दिँदै सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीमण्डल भने धेरै अस्थिर रहँदै आएको छ।
पछिल्ला तीन वर्ष चार महिनामा उनले मन्त्रिपरिषद १८ पटक फेरबदल गरेका छन्। यसबीच उनले मन्त्रीहरू प्रशस्तै फेरेका छन्। बिहीबार मन्त्रीमण्डललाइ पूर्णता दिँदा थपिएका मन्त्रीका बारेमा चर्काे अालाेचना भइरहेकाे छ । खासगरी श्रीमान श्रीमती अालाेपालाे मन्त्री बनाएकाे भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निकै खेदाे खनिएका छन् । खासगरी पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी श्रीमती नैनकला थापालाइ सञ्चार मन्त्रीकाे जिम्मा दिएपछि धेरैकाे छाती पाेलेकाे छ । के नैनकला बादलकी श्रीमती मात्र हुन् कि राजनीतिक याेगदान पनि केही छ भन्ने कुराका बारेमा माेटामाेटी जानकारी प्रस्तुत गरिएकाे छ।
पारी पुरानो बटौली, वारी खस्यौली । वारीतिर खासै वस्तिबाक्लिएको थिएन । बागलुङ भिमपोखरामा २०१६ सालमा जन्मनु भएकी नैनकला थापा मगर माइली छोरी हुनुहुन्छ । बुवा नरबहादुर थापा भारतीय सैनिकमा कार्यरत भएकाले बुवासँगै स–परिवार पल्टनतिरै जानुभयो ।
बुवाको पल्टन दार्जलिङ, उडिसा, देहेरादून सरिरह्यो । क्याम्पभित्र बाह्रखरी छिचोल्ने हुनुभयो नैनकला । हवल्दार पदमा अवकास आउनुभयो नरबहादुर । एक वर्ष भिमपोखरामै बस्नुभयोे । ३ बहिनी र एक छोरालाई लिएर २०२४ सालमा नयन कलाका बुवा बुटवल झर्नुभयो । बुटवल राजमार्ग चौराहमा नैनकला हुर्कनुभयो । त्यहीँको कालिका माविमा अध्ययन सुरु गर्नुभयो । दश कक्षा उत्तिर्ण गरेकै साल २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुनुभयो । यही क्रममा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुनै बेलाको मूलधार मानिने ‘चौथो महाधिवेशन’को सदस्य बन्नुभयो नैनकला ।
एसएलसी सकिएसँगै उहाँ अध्ययन गरेकै विद्यालय कालिका माविमा शिक्षिका हुनुभयो । शिक्षिकासँगै शिक्षा संकायको पढाईलाई पनि निरन्तर दिनुभयो । २०३८ नेकपा (चौथो महाधिवेशन) बाट पार्टी सदस्यता लिनुभयो । सोही साल उहाँ रुपन्देहीको अखिल नेपाल महिला संघकी जिल्ला सचिव हुनुभयो । आन्दोलनकै क्रममा २०४० सालमा उहाँले रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग बिवाह गर्नुभयो । रुसको अध्ययन छोडेर आन्दोलनमा होमिएका बादलसँगको भेट गराउने मेसो सूर्या थापाले गरिदिनु भएको थियो । सूर्या नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहकी माइजु हुन । अहिले सूर्या र उहाँका पति गोविन्दसिंह थापालाई सिंहले कार्वाही गरिसक्नु भएको छ । ‘नैनकला र म असाध्यै मिल्थ्यौं । मेरै करबलले रामबहादुरसँग विवाह भएको हो २०४० सालतिर’, सूर्याले भन्नुभयो ।
विवाहपछि नैनकलाले पढाई, राजनीति, पारिवारिक जिम्मेवारी एकैसाथ बहन गर्दै आउनुभयो । ‘मास्टर, पढाई, राजनीति दिदीले सँगसँगै अघि बढाउनु भयो’, भाइ ठाकुर थापाले भन्नुभयो । शिक्षणसँगै नैनकलाले शिक्षा र मानविकीमा स्नातक गर्नुभयो । विवाहसँगै उहाँको भूगोल फेरियो । बादलसँग विवाह गरेपछि उहाँ नारायणी मावि, चितवनमा सरुवा हुनुभयो । त्यहाँ उहाँ उत्कृष्ठ शिक्षिका समेत घोषित हुनुभएको थियो ।
नेकपा (मसाल)को विभाजन हुनै लाग्दा २०४२ मा उहाँ अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय महासचिव बन्नुभयो । पछि मसाल मोटो र पातलो भनेर विभाजन भयो । २०४७ मा नैनकला अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय संयोजक बन्नुभयो । तात्कालिन एकताकेन्द्र गठनपछि उहाँ २०५० मा एकीकृत अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय महासचिव बन्नुभयो । शान्ति प्रक्रियापछि नैनकला राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षको (२०६४–२०६८) जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो । त्यससँगै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको महिलासम्बन्धी विज्ञ समूहको सदस्यका रुपमा पनि उहाँले काम गर्नुभयो ।
माओवादीले जनयुद्धकालमा स–परिवार भूमिगत हुने कि नहुने भन्ने विषय पार्टीमा निक्कै बहस चल्यो । नैनकला सधैँ त्यही केन्द्रबिन्दूमा पर्नुहुन्थ्यो । बादलसँग भूमिगत किन नहुने ? मृदभाषी, मिलनसार शिक्षाप्रेमी नैनकलाको स्वभाव । पार्टीभित्र आफ्नो पतिको उतारचढावको प्रत्यक्ष साक्षी हुनुहुन्छ ।
माओवादी–केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सबै भन्दा बढी मनोविज्ञान बुझ्न सक्छिन । बादलका कतिपय उतार चढावमा प्रचण्डले नैनकलासँग निरन्तर सम्वाद गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । मोहन वैद्यसँग बादल प्रचण्डलाई छोडेपछि पुनः एकतामा आउने भूमिकामा नैनकला नै हुनुहुन्थ्यो ।
‘लो प्रोफाइल’मा बस्न रुचाउने नैनकला र प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निरन्तर सम्पर्कबाट एकताको वातावरण सिर्जना भएको प्रचण्डका पारिवारिक स्रोतहरुले बताएका थिए । खासै बोल्न नचाहने बादल श्रीमती नैनकलामार्फत के गर्न सकिन्छ ? भनेर प्रचण्ड र सीताले निरन्तर प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसैको परिणाम वैद्य आफ्नै पार्टीमा रहे, बादलसहितको टिम प्रचण्डसँग एकतामा आयो ।
भर्खरै विदा हुनुभएका निवर्तमान सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्नुभएको छ । गुरुङकै उत्तराधिकारीको रुपमा आउनु भएकी नैनकलाको बाहिरी चर्चा छैन । यद्यपि सञ्चार जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने सामथ्र्य उहाँमा छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको दृढ संकल्पका साथ अघि बढाउनु भएको ‘सम्बृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउन सञ्चारको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । यसअघिका सञ्चारमन्त्रीले अघि सारेका परियोजनालाई निरन्तरता दिनेछु,’ मन्त्री नियुक्तिपछि थापाले भन्नुभयो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरूङले पाएनन् विश्वासको मत, विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउने ढोका खुला
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सदनमा राखेको विश्वासको मत प्रस्ताव फेल भएको छ । प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २७ मत र विपक्षमा ३० मत झरेको छ । विश्वासको मत पास हुन कम्तिमा ३१ मत चाहिन्छ।
विश्वासको पक्षमा एमालेका २७ जना सांसदले मात्र मतदान गरे। विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका ३० जनाले मतदान गरेका थिए।
मतदानमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे उपस्थित भएनन् भने जनमोर्चाले कारबाही गरेका कृष्ण थापा तटस्थ बसे ।
ठूलो दलका नेताको हैसियले गत वैशाख २९ गते गुरूङ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री गुरूङले विश्वासको मत नपाएसँगै अब नया सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुनेछ।
अब प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछिन्। कुनै एक सांसदले आफूसँग बहुमत भएको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखकहाँ गएपछि नयाँ सरकार गठन हुनेछ । यसरी गठन हुने नयाँ सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा ४ दल गुरूङ सरकार ढाल्न लागेका थिए। कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर यो गठबन्धनले अविश्वास प्रस्तावसमेत ल्याएको थियो। २ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश भएको थियो ।
तर अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुन पाएको थिएन । १५ वैशाखको बैठकमा मतदान हुने कार्यसूची भएपनि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठकलाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिएका थिए। पछि कार्यव्यवस्थाको बैठकले २७ वैशाखमा अविश्वासमा मतदान हुने निर्णय गरेको थियो । मतदान हुनु एक दिनअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले ३ दिनभित्र बहुमत दाबी गरेर आउन विपक्षीलाई समय दिएपनि उनीहरु जान सकेनन् । र ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा नै दोहोरिएका थिए। संविधानको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले १६८ (३) अनुसार गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए ।
२९ वैशाखमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले १ महिनामा विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण विश्वासको मागेका थिए।
सम्झना शाहीसहित राउटे मुखिया किन पुगे मुख्यमन्त्री कार्यालय ?
June 12, 2021 N88
जर्णेलकी श्रीमतीलाई जगल्ट्याएकी गुरुङ मन्त्री बनिन्
June 9, 2021 N88